Home » Health & Fitness » လှပသော အမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးရွားစေနိုင်
Posted by Good Idea on Dec 4, 2010 in Health & Fitness | 14 comments
ယခုအခါ သူတေသနအသစ်တစ်ရပ်အရ အမျိုးသားများသည် လှပသော သူစိမ်းတစ်ရံစာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ငါးမိနစ်မျှသာ တွေ့ဆုံရုံနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများ လွန်စွာမြင့်တက်လာပြီး ယင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးရွားစေကြော
(Mail ထဲရောက်တာလာကို ဗဟုသုတ တိုးစေလိုတဲ့အတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်)
ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ရုပ်ဆိုးဆိုး မိန်းမတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြပေါ့.. ;)
ဆူးရေ .. ရယ်စရာ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆူးရယ် .. မိုးမိုးရယ် .. ဝေေ၀ရယ် စုပြီး သူတို့ကို တွေ့ခိုင်းရင် .. သူတို့ ကျန်းမာသွားလိမ့်မယ် ထင်တယ် ..
ကဲ… ဘော်ဘော်တို့ရေ၊ အလှအပကို ရွေးမလား၊ ကျန်းမာရေးကို ရွေးမလား? တို့ကတော့ မပြောဘူး၊ သတ်ချင်သတ်…
လှတာ မက်လို့ ညစာခက်တယ် ဆိုတာ ဒီလိုတွေကြောင့် ပေါ်လာတာ ဖြစ်မယ်။ အားလုံးကျန်းမာ ကျပါစေ။
လှတာမက်တော့ညစာခက်ဆိုတာမိန်းမတွေ ကို ပြောတာ
အားရှိ အလှပဲမက်တော့ ထမင်းအိုး တူး ဟင်းမချက် ညစာငတ်
လှတာမက်တော့ ဟိုဝယ်ဒီဝယ် ငွေပြတ်ညစာငတ်
လှတာမက်တော့ ဝိတ်တက်မှာကြောက်လို့ Diet တော့ ညစာငတ်
ကိုကြယ်လေး ကျန်းမာ ပါရဲလား… ကျန်းမာအောင် နေနော်။
ကိုပေါက် .. မော့စ်ကပြောတော့ အဓိကက အဓိက ဆို .. ကိုပေါက်က အဓိက မဟုတ်ဘူးလား ..
အလှအတွက်နဲ့ အသက်ပင်သေသေဆိုတာ For Men Only ဖြစ်တယ်၊
လှတာမမက်တော့ ညတာခက်” ……… တဲ့။
white ကလဲ … လွယ်လွယ်လေးကို ခက်အောင်လုပ်နေပြန်ပြီ။
ချက်နည်းပြုတ်နည်းကို မဝေဆီမှာ သင်တန်းတက်ပြီး လှတာလေးပဲရွေးလိုက်ပေါ့
အဲ့ဒါဆို ညစာလည်းမခက်တော့ဘူးပေါ့ … ကောင်းဘူးလား။
အိုကေ … ဟိုကောင့်ကိုနှလုံးရောဂါနဲ. မြန်မြန်သေအောင် သူ.အနားမှာ သွားထိုင်နေလိုက်မရ်။ ၅ မိနစ်ဆိုမသေချာဘူး။ ၅ နာရီလောက်ကိုသွားထိုင်နေလိုက်မရ်။